जिउँदो मान्छेको करामत र यमराज
हात्तीले जवाफ दिएछन्- “मानिसको जात मापाको ज्याद्रो पो हुन्छ त यमराज, तिमी यमलोकमा मरेको मानिससँग संगत गर्छौ अनि के थाहा पाउछौ र? कुनै दिन जिउँदो मानिसको फेला पर्‍यो भने थाहा पाउँछौ!”
यति भनी हात्ती फेरि माहुतेको डरले माहुते भएतिर गयो भने यमराज चाहिं गम खाँदै यमलोक फर्कियो।
यमलोक पुगेपछि यमराजले जिउँदो मानिस कस्तो हुँदो रहेछ त भनी जान्नेि विचारले आफ्ना दुतहरू चण्ड, अचण्ड र प्रचण्डलाई मर्त्यलोकबाट एउटा जिउँदो मानिसलाई यमलोक ल्याउन अह्राएछन्।
यमदुतहरूले एउटा सुतिरहेको मानिसलाई उसले थाहै नपाउने गरी खाटै समेत बोकेर यमलोकतिर लाँदै गरेछन्। यमराज कहाँ पुग्ने बेलामा नर्कमा बलिरहेको आगोको रापले जिउँदो मानिसको आधा निद्रा खुलेछ र आफु यमलोक आइपुगेको भन्‍ने उसलाई थाहा पनि थिएन। उसले भन्ठान्यो कि उसका तीनै छोराहरू चण्ड, अचण्ड र प्रचण्ड अनि नोकर यमे आगो ताप्न दाउरा बालेर दाउरा खेर फाल्ने काम गर्दैछन्। उसले अर्धनिद्रामै छोराहरूलाई हकारेछन्- “तिमीहरूलाई, भातमारा पाजी हो, यो आगो कसले बाल्यो, तुरुन्त निभाओ। चण्डे ए चण्डे, हैन अचण्डे र प्रचण्डे पनि कता मुण्टिएछन् बजियाहरू?”
यसरी आ-आफ्नो नामै काढेर हकारेको देख्दा यमदुतहरूको सातोपुत्लो उड्यो र उनीहरूले लुगलुग काम्दै जिउदो मानिसलाई यमराजकहाँ लगे।
ऊ बम्कँदै थियो- “ए यमे, यमे। पख्लास् भतुवा, आज तैंले चाहिं राम्रै चाख्ने” भइस्। तेरा पिडुँला नफर्काई त कहाँ छोडुँला र?”
यसरी आफूलाई पनि बेस्सरी हपारेको देखेर यमराज पनि अक्कल न बक्कस परेर बोली नै फुटाउन सकेनन्।
त्यतिन्जेालमा जिउँदो मान्छेको निद्रा पुरै खुल्यो र उसले आफूलाई यमराजको अगाडि पायो र सबै यथार्थ बुझिहाल्यो। तर उसले आफूलाई तुरुन्त सम्हाल्यो र स्थिति सम्हाल्ने उपाय सोचिहाल्यो। अनि यमराज अक्कस न बक्कि परेको मौका छोपी खाटबाट बर्लुक्कज उफ्रियो र दौडेर यमराजको सिंहासन नजिक गयो। त्यसपछि सिंहासन नजिकै रहेको यमदण्ड आफ्नो हातमा लिएर उठायो र कुर्ल्यो- “चण्डे, अचण्डे, प्रचण्डे। यो पाजी स्वाँठ यमेलाई पाता फर्काओ। यसको यत्रो हिम्मत! जिउँदो मान्छेलाई यमलोक ल्याउन लगाउने? यसका डँडाल्नुमा तिमेरु तीनैजनाले पालैपालो १००।१०० कोर्रा बर्साओ।”
सृष्टिोपालक भगवान् विष्णुको नियमअनुसार यमदण्ड विना यमराजले पनि कुनै आदेश दिन नसक्ने र हातमा यमदण्ड हुनेकै आदेश यमदुतहरूले पालन गर्नुपर्ने थियो।
यसरी एक्‍कासी आफुमाथि आपत आइपरेपछि यमराज दौडेर बैकुण्ठलोक पुगेर भगवान् विष्णुको पाउमा छाँद हालेर बिन्ति गर्न थाल्यो- “प्रभो ! मबाट गल्ती भयो। मलाई क्षमा बक्सियोस्, मलाई यो संकटबाट बचाईबक्सियोस्।”
“हवस् प्रभो।” भन्दै यमराज त्यो चिठी लिएर यमलोक फर्के र जिउँदो मानिससँग माफी माग्दै उसलाई त्यो चिठी दियो। त्यस चिठीमा यमराजले बिराएकोले एकपल्टलाई भगवान् विष्णुका तर्फबाट यमराजलाई माफी दिइएको र जिउँदो मानिसलाई यमलोकको सिंहासन र यमदण्ड यमराजलाई फर्काई सृष्टिोको नियम सुचारु गर्न अह्राइएको थियो। यसप्रकार यमराजले आफ्नो सिंहासन र यमदण्ड फिर्ता पाए र उनले जिउँदो मानिसलाई सम्मानपूर्वक मर्त्यलोक पुर्यायई आउन आफ्ना दुतहरुलाई अर्हारए।”
(स्रोत: https://shresthakedar.wordpress.com, modifylifestyle.com)